WAA KUMA ABDIHAKIM OSMAN NUUR OO ISBAARO FACEBOOK SAMEYSTAY? UPDATED DECEMBER 2018
On 4/9/2016 (IST)
Waxaa beryahan ku soo batay FACEBOOK dad isbaarooyinkii Somaliya oo ELECTRONIC ah ka sameystay INTERNETKA,iyagoo qof walba oo ay ka dareemaan in uu dhibaato yar yahay ka daba qaata ilaa ay ka gaaraan danta ay ka leeyihiin oo waxa luqadda Ingiriiska lagu yiraahdo BLACKMAIL,baad ayay ka qaadaan qof walba oo ay is leeyihiin wax waa ka socon karaan,hadii qofka ay baadayaan uu ka hor yimaado,waxay FACEBOOK soo geliyaan af-lagaado aan hore loogu arkin dhaqanka Islaamka iyo kan Somalida,shaqsiyada noocan ah ma ahan in laga baqo ama laga aamuso,waa in banaanka la soo dhigaa si umadda ay u aragto.
DECEMBER 2018 wuxuu MALYUUN ku sameeyay hoos ka dhegeysta.
Bishii AGOOSTO 2018 Abdikarim waxaa ku dhacday arin cajiib ah, sidii lagu yaqaanay wuxuu madaxa isu geliyay dumar reer Minneapolis oo intuu maqaayad ku balamiyay ay dagaal fara ka hadal ah uu ka dhex qarxay, Abdikariim waxaa soo gaaray dhaawac adag oo isla markiiba isbitaalka loo geeyay, iminka arinta faraha ayay ka baxday oo Bileeyska USA ayaa dacwo ka diyaarinaya.
Bishii Feberaayo 2018 wuxuu isku dayey in uu ka BEEN ABUURO gabdho Somali ah oo xaflad maalinta haweenka ku qabsanaya maqaayad ku taala magaalada Minneapolis oo la yiraahdo SAFARI, wuxuu FACEBOOK soo dhigay in xaflada ay tahay mid loo dhigayo GAY iyo LESBIAN oo qofkii ka qeyb gala uu la dagaali doono, waraaqda hoose waa mid ka timid qareenka gabdhaha oo sida aad ku aragtaan looga mamnuucay in aan u soo dhowaan karin ama waxba ka soo qori karin.
PRE-TRAIL ama DHEGEYSIGA MAXKAMADA ee lagu qaaday ABDIHAKIM OSMAN NUUR 5.1.2018, yaa waxay maxkamada go'aamisay in maxkamad la saaro 21.5.2018 kaasoo u dhici doonaa QAABKA JURY TRIAL oo hadii dembiyada lagu eeday oo kala ah, STALKING - USE MAIL/DELIVER/LETTER/TELEGRAM/PACKAGE (GM) lagu helo uu muteysan doono XARIG iyo GANAAX waqti dheer ah.
Waxaa kale oo laga mamnuucay ilaa bisha MAAJO 2018 aan wax CAAY ama XIRIIR ah aa la sameyn karin shaqsiga soo dacweeyay.
Maxkamadii ugu dambeeysay oo lagu soo oogo shaqsigan dumarkii Somaliyeed ay ka nabad geli waayeen waa mid ka furmi doonta magaalada uu dadka ku biiqsado ee Minneapolis, Abdihakim Osman Nuur waxaa lagu haystaa arimo farabadan oo ay suuroowdo XABSI iyo GANAAX aad u culus.
Shabakada SOLAPORTAL waxay aad ugu faraxsan tahay in xiligii aan baarista ku bilownay oo ahayd bilowgii sanadka 2016 ilaa hada aan helnay aqbaaro aad u farabadan oo shaqsigan QAXOOTINIMO looga soo qaaday YEMEN ku saabsan, wuxuuna iminka magaciisa Abdihakiin Osman Nuur oo noqday NUMBER 1 GOOGLE oo markiiba SOLAPORTAL ay kuu soo baxeyso.
Inta badan wuxuu isticmaalaa QABIIL iyo sidii u xumayn lahaa qofka uu is leeyahay biiqsigaaga ma aqbalo, marwalba wuxuu jecelyahay in wixii markaa bulshada ay aad u xiiseeyaan uu u isticmaalo si dad badan ay u bartaan, tusaale xiritaankii ABDIRAHMAN ABDISHAKUR iyo DABCASAR ayaa isku waqti ahaa,wuxuu soo duubay sidaad ku aragtaan VIDEOWGA hoose mid JEES-JEES ah oo u eg kii DABCASAR isla markaana si QABIIL ah u hajuumaya dadka ku nool GALMUDUG ee Mudane ABDIRAHMAN ABDISHAKUR uu ka dhashay.
Waxaa kale oo ayaamahan dambe uu caadeystay in dhalinyarada masaakiinta ah ee uu ugu yeero XERTAYDA hadii ay hadalkiisa naqli waayaan uu daba dhigto, cod ka duubo isla markaana ku eedo in ay SIXIR sameeyaan! eeg sawirka hoose:
Wuxuu aad u daba dhigtaa SIYAASIYIINTA lagu dalbo ama uu is leeyahay sidaad wax u rabtay kama aadan helin!
Wuxuu BLACKMAIL ku haystaa ganacsatada,siyaasiyiinta iyo qofkii uu is leeyahay waxbaad ka heli kartaa.
Waxyaabaha cusub ee shaqsigan lagu bartay waxaa ka mid ah isagoo baraha bulshada ku BIIQSADA DUMARKA Somaliyeed iyo dadka ka baqa in warar been abuur ah uu ka soo qoro,qofkii si toos ah ula hadlana wuxuu isla markii ku furaa dacwo BEEN ABUUR ah oo dadka qaarkood ay ka baqaan,tusaale hoose waa dacwad waabsi ah oo uu ku furay gabar Somaliyeed oo ku nool wadanka Mareykanka isagoo ku eeday in ay dagaal ku soo qaaday.
Waxaa kale oo lagu yaqaanaa in wixii FARIIN ah oo aad si hoos SOCIAL MEDIYAHA ugula sheekaysatid uu banaanka soo dhigo isagoo doonaya in aad ka baqdid
Waxyaabaha kale ee lagu yaqaano waxaa ka mid ah in uu ku fadeexeeyo dadka isqaba hadii uu ka waayo baada iyo waabsiga FACEBOOK ee dad badan ay uga baqaan.
Gabdho farabadan oo isaga hore ugu soo caayey FACEBOOK ayaa markii dambe waxaa ku dhacay cudurka "STOCKHOLM SYNDROME" oo ah arin maskaxda ku dhacda oo QOF ADIGA AAD U AF DUUBNAYD OO MARKA DAMBE TAAGEERE AAD U NNOQOTID"
BIIQSIGA ama BULLYING uu ku shaqeysto waxaa ka mid ah in DUMARKA sawiradooda uu u diro isagoo fariin ugu diraya waxa uu ku sameyn doono,tusaalaha hoose fiiri!
Dhamaadkii sanadkii hore waxaa la soo xiriiray shabakada SOLAPORTAL shaqsi aqriyay isla markaana daawaday arin runtii aad u foolxun oo ahayd in milkiilaha shabakada DAYNIILE Axmed Kalaay la yiri wuxuu QAAHIRA ku kufsaday gabar uu dhalay,iyadoo isla markaa gabar yar oo wejiga u daboolan yahay inta VIDEO laga soo duubay iyadoo leh,AABAHAY AXMED KALAAY ayaa i kufsaday.
Shabakada SOLAPORTAL baaritaan dheer ka dib waxay aqristayaasha u soo bandhigtay xaqiiqada iyo in arinta lagu sameeyay AXMED KALAAY aan waxba ka jirin,waxaana laga soo abaabuley magaalada MINNESOTA oo uu ka dambeeyay shaqsigan magacyada badan ku soo gala FACEBOOK ee la yiraahdo ABDIHAKIM OSMAN NUUR oo magacyo kala duwan oo farabadan ku soo gala FACEBOOK,kan ugu caansan waa SAXARLA M JAMA.
Qaabkii aan xiligaa u sameynay baaritaanka AXMED KALAAY iyo gabartiisa oo la yiri wuu kufsaday HALKAN RIIX
Ugu horeyn barasho wanaagsan ABDIHAKIM OSMAN NUUR AMA SAXARLA M JAMA.
Ugu horeyn qaabka uu dumarka Somalida u caayo bal hoos ka eeg,waa GABAR KACBADA tagtay oo FACEBOOK soo gelisay,bal eeg wuxuu ka soo qoray!
Tafatiraha DAYNIILE Mr AXMED KALAAY iyadoo arimah noocaas ah lagu sameeyay ayaa waxaa bishii JANAAYO 2016 lagu qasbay in uu raali gelin siiyo shaqsiga INTERNETKA soo geliyay in uu GABARTIISA iyo HOOYADII kufsaday. eeg sawirrada hoose:
ABDIHAKIM OSMAN NUUR dadka ISBAARADA uu u dhigto uma kala soocna,HOOYO,AABO,DHALINYARO iyo qof walba oo uu is leeyahay amuu kaa baqaa qaabkaa ayuu ula dhaqmaa,arimaha dadkii MASAR ku dhintay ee la yiri waxaa lagala baxay KELIYAHA waa shaqsigii ka dambeeyay oo rabay in uu ku baado DR SAABIR oo ah Gudoomiyaha iskaashiga MASAR-SOMALIYA oo ah shaqsi aad looga qadariyo wadankaa isla markaana dadka Somalida aad u gacan qabtay,eeg waxyaabihii uu ka soo qoray.
Markii shabakada SOLAPORTAL ay baaritaan ku sameysay arintan oo banaanka soo dhigtay siday wax u jiraan DR SAABIR waxaa FACEBOOK ku soo waabsaday ABDIHAKIIM OSMAN NUR- eeg sawirka hoose:
Tan iyo intii qoraalka arimaha MASAR iyo ABDIHAKIIM OSMAN NUR aan diyaarinay,waxaa shabakada SOLAPORTAL ay ka soo uruurisay boggiisa FACEBOOK ee u gaarka ah,taasoo dad isugu jira RAG iyo DUMAR uu ku waabsaday si ay uga baqaan oo wixii uu doono ay ugu fuliyaan
Waxaan ka soo xulnay qaar ka mid ah,taasoo aad ku arki kartaan qaabka uu dadka aan waxba ka galabsan uu BLACKMAIL ugu sameeyo,waxaa aad loogu yaqaanaa in uu yiraahdo "HOOYADII AYUU XOOGAY"oo uu ogyhahay arin xanuun badan oo dadka qaarkood aan u adkeysan karin: eeg sawirrada hoose:
Markii waxa uu yahay banaanka la soo dhigay BARYOOTAN ayuu bilaabay,eeg sawirka".
Qofkii uu arimo noocaan ah uu ku sameeyo yaanu ka aamusin,fadlan si toos ah ula soo xiriir shabakada SOLAPORTAL,waxay idinka balanqaadi doontaa in ISBAARO dambe aanu dhigan FACEBOOK iyo shabakadaha uu waabsiga ku haysta oo wax walba u soo qora.
FACEBOOK wuxuu ku soo galaa 20 ACCOUNT oo kala duwan,weligaa MESSAGERKA hakula sheekaysan,hadii uu kula soo xiriiro BLOCK saar,uma qalmo in waqtigaaga qaaliga ah aad ku dhumisid.
SIMPLY WAA MOORIYAAN FACEBOOK ISBAARO DHIGTAY!
Waxaa hubaal ah in reer Minnesota ay si fiican u yaqaanaan shaqsigan isbaarada dhigtay FACEBOOK oo habeenkii saxda dhexe inta uu soo galo HABLIHII Somaliyeed ee sharaft lahaa waxayaabaha aad dusha ku aragteen kula dhaqma,lagama aamuso kan oo kale waa BULLY oo raba dadka wax aan jirin inta uu ka soo qoro sidaa looga baqo!, YOUR TIME IS OVER.